अनुगमन र कारबाही शुरु भएपछि सबै पेट्रोल पम्प खुले - Aarthiknews
शुक्रबार, २३ जेठ २०७७ Friday, 05 June, 2020
काठमाडौं । कोरोनो भाइरसको त्रास देखाएर बजारमा व्यापारीको लापरबाही बढेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूतिमन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोल पम्पको अनुगमन गरेका छन् ।
बुधवार बिहान मन्त्रीले पम्प अनुगमन गरेपछि दिउँसो पेट्रोल पम्पमा लाइन न्यून देखिएको छ । उपत्यकाका सबै पम्पले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेपछि उपभोक्ता लामो लाइन बस्नु परेन ।
बुधबार सामान्य लाइन भएको र लामो लाइन हटिसकेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । बिहीवार पूर्ण रूपमै लाइन हट्ने निगमको दाबी छ । गएको आइतबारदेखि पम्पहरूमा पेट्रोल र डिजेल भर्नेको लामो लाइन देखिएको थियो तर बुधबार भने लाइन घटेको छ । सरकारले पम्पहरूलाई कारबाही गर्न थालेपछि बुधबार सबै पम्पले बिक्री गरेका छन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मङ्गलबार राति मैतीदेवी पेट्रोल पम्म र सत्याल एन्ड किराना पसल टीकाभैरवलाई दुई लाख रुपियाँका दरले जरिवाना गरेपछि बुधबार पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज देखिएको छ । भण्डारण गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरकाले उनीलाई कारबाही गरिएको थियो ।
बुधबार विभागले दुईवटा पम्प र छवटा ग्यास पसलमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनमा सामान्य अवस्था देखिएको विभागले जनाएको छ । विभागले कुनै पनि वस्तु भण्डारण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएमा ११३६ नम्बरमा फोन गरेर जानकारी दिन उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।
पम्पसँगै मन्त्री भट्टले ग्यास पसल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गर्नुभएको थियो । सुरक्षाकर्मीबिना उपभोक्ताको शैलीमा बजार अनुगमन गर्नुभएका मन्त्रीले बजारमा ग्यास तथा पेट्रोल वितरणको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिनुभएको थियो । कालीमाटीको तरकारी बजारमा पनि उहाँले अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
कडा कारबाहीको चेतावनी
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । निगमले बुधबार सूचना जारी गरी बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ सहज भएकाले हल्लाको पछि नलाग्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ता भयभित बनाएर फाइदा उठाउने कार्यमा निगमका बिक्रेता, ढुवानीकर्ता तथा एलपी ग्यास बिक्रेताको संलग्नता पाइएमा निगमले कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
बजारमा अभाव हुन्छ कि भनेर अति प्रज्ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण नगर्न र आवश्यक भन्दा बढी ग्यासका सिलिन्डर घरमा भण्डारण गर्दा सुरक्षा एवं आगजनीका दृष्टिकोणले असुरक्षित हुने भएकाले सञ्चय नगर्न अनुरोध गरेको छ । ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ मागभन्दा बढी आयात भएकाले बजारमा अभाव हुन नदिने निगमले जनाएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ुमागभन्दा बढी आयात भएको छ, बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ पु¥याएका छौँ तर केही पम्पले मूल्य घट्छ भनेर सप्लाई नगरेकाले र केहीले भएर पनि छैन भनेकाले समस्या भएको हो, पेट्रोलियम पदार्थ पर्याप्त छ हल्लाको पछि नलागौँ ।
भाँडोमा बिक्री नगर्न निर्देशन
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन राष्ट्रिय महासङ्घले सवारी साधनमा मात्र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न निर्देशन गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले डिलर्सलाई निर्देशन दिएपछि महासङ्घले आफू मातहतका डिलर्सलाई निर्देशन गरेको हो ।
सवारी साधनमा भन्दा पनि जर्किन तथा ड्रमहरूमा भर्नेको लाइन बढेपछि सवारी साधनबाहेक कुनैै पनि भाँडामा बिक्री नगर्न कडा निर्देशन गरिएको छ ।
बुधबार लाइन घटेको छ । आपूर्ति निरन्तर भए पनि उपत्यकाका अधिकांश पम्पले बिक्री वितरण नगरेकाले पम्पमा लाइन बढेको थियो । बुधवार भने सहज रूपमा उपभोक्ताले पेट्रोल डिजेल पाएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर घटेपछि नेपालमा पनि घट्ने अनुमानले डिलर्सहरूले डिपोबाट तेल भरेका थिएनन् ।
कोरोना भाइरसको त्रासमा कालोबजारी गर्ने दाउले केही पम्पले तेल भण्डारण गरेर वितरण नगरी बसेकाले उपभोक्ता लाइन बस्नुपरेको थियो । बुधवार सबै पम्पले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गरेको महासङ्घका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए । नेपाल आयल निगमका अनुसार बुधवार काठमाडौँ उपत्यकामा ११ सय किलोलिटर पेट्रोल र १३ सय किलोलिटर डिजेल बिक्री गरेको छ । मङ्गलबार एक हजार किलोलिटर पेट्रोल बिक्री गरिएको थियो ।
म्यानमारमा रहेका नेपाली लिएर काठमाडौं आइपुग्यो जहाज
दैनिक १० हजार नमुना जाँच्ने क्षमताका उपकरण खोज्दै सरकार
खर्च व्यहोर्नेलाई होटल, अन्यलाई स्थानीय क्वारेन्टाइन
ढुवानीमा अवरोध गर्नेलाई कडा कारवाही
आजको आवश्यकता - कृषिमा प्रविधिको अपरिहार्यता
कोरोनाविरुद्ध नेपालले बनाएको खोपमा डब्ल्युएचओको चासो
सानिमा लाईफको ग्राहकलाई मोबाइल एपको सुविधा
भन्सारबाट छुटेका विद्युतीय गाडीको कम्पनीले भन्यो, यी मितिमा यसरी आएका हुन
दश व्यवसायी संस्थाद्वारा आन्दोलनको घोषणा
आफुखुसी बजार खोल्दा समुदायमा कोरोना फैलिए कसले जिम्मा लिने ?
ट्रक व्यवसायीको चेतावनी- सेवा रोक्न बाध्य नपारियोस् !
व्यवसायी–सीडीओ वार्ता सकारात्मक, बजार खुल्ने नयाँ तालिका आउँदै
कोभिड १९ बीमा स्थगित, बीमक भन्छनः फेरि शुरु हुन्छ
औषधिमा अब भारत चीनको भर नपर्ने
'रेडमी नोट ९ प्रो' नेपालमा सार्वजनिक